Indlwane yoKhozi - I-Airbnb
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguHelene& Jacques
UHelene& Jacques yi-Superhost
I-Eagle's Nest ibekwe ngaphakathi kweCape Breton Highlands National Park. Indlu ikwiCabot Trail kwindawo ezolileyo kakhulu, eyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kuzo zonke iintsuku zakho zokufika.Ligumbi elipholileyo elinegumbi elinye elinomnyango wabucala. Sinikezela nge-Wi-Fi yasimahla. Umabonwakude. Indawo ibandakanya i-Queen Murphy bed, ikhitshi egcweleyo, i-BBQ, ibhedi enye (inokongezwa), igumbi lokuhlambela elineshawa, indawo yokungena yabucala. Imizuzu kuphela ukusuka elunxwemeni, iHighlands Links ibala yegalufa, iindledlana zokuhamba intaba, iindawo zokutyela kunye neKeltic lodge.
Indawo yethu yokuhlala ethe cwaka iphezu kwevenkile yokusebenzela egcina izixhobo kuphela njl.njl. Asiyondawo yokusebenzela. Ibandakanya ikhitshi eligcweleyo , ibhedi elingana ne queen , izitulo ezi -2 ezitofotofo . Igumbi lokuhlambela lineshawa. I-TV, i-wifi, iyafumaneka. Singongeza ibhedi enye ukuba iyafuneka. Idesika ineseti ye-bistro kunye ne-BBQ.
Sikumgama wokuhamba ukuya kwindawo yokutyela enelayisensi epheleleyo ebonelela ngokonwabisa ngokuhlwa. Igrosari ingumzuzu omnye kuphela endleleni ngemoto. Uninzi lwezinye iindawo zokutyela, iivenkile kunye neelwandle kumgama oziikhilomitha ezi-5.
Umbuki zindwendwe ngu- Helene& Jacques
Sisoloko sikhona ukuze siphendule imibuzo okanye sinikeze iindwendwe ngezinto ezinokuzifuna.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$393